ကွဲသွားရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကြူကြူသင်း – Daily Feed MM
ကွဲသွားရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကြူကြူသင်း
Admin_John | October 25, 2020 | Cele | No Comments
သရုပ်ဆောင် ကြူကြူသင်းကတော့ ဟာသ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဘဝနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ယခုထက်တိုင်ရရှိနေသူတစ်ဦးပါ။ ဒီလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပေမယ့် သူမအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
ကံမကောင်းခဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ကွဲခံရတဲ့ အကြောင်းကို မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာ အခုလို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပါ။အချစ်ရေးဆိုတာမျိုးက ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ ကိုယ်အချစ်တွေပေးတယ် သူတို့ မယူတတ်ဘူးပေါ့ ကိုယ်လည်းမယူနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုက
ဒီလိုကံပါလာလို့ ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲ နောက်ပိုင်းကျတွေးတယ် ပထမတော့ ငါ့ကျမှ ဒီလိုဖြစ်ရလားဆိုပြီး အရမ်းဝမ်းနည်းတာ အရမ်းလည်းရှက်တယ် အမဘဝမှာ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ကိုမထင်ခဲ့ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမေတို့ဆုံးပြီးမှ အမက အိမ်ထောင်ပြု
တာကိုး အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါကျတော့ ဒီဟာကြီးကိုရှက်တာပေါ့နော် အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတာကို ရှက်တာပေါ့နော် ကိုယ်အိမ်ထောင်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူ့ကိုမပြောခဲ့ဘူး သုံးလေးနှစ်နေတော့မှ သူတို့သိကြတယ် ၃ ၄ နှစ်တောင်မကပါဘူး
၅ နှစ်လောက်နေမှသိတာ သူတို့က ကိုယ့်အမျိုးသားနာမည်မေးရင် ဘယ်မှာလဲ ဆို ဟိုမှာ လိုက်မသွားဘူးလားဆို ဟိုတလောတုန်းက ပြန်လာတာ အဲ့လိုမျိုးပဲ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုမေးတတ်တဲ့လူတွေရှေ့မှာ အမ ဘယ်တော့မှ မနေတော့ဘူး အဲ့လူတွေကိုရှောင်နေတယ် သူ
တို့နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာနေတယ် သူတို့နဲ့တန်းတူရီချင်ပေမယ့် အမမရီနိုင်ဘူးဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမတို့က မိန်းမသားတွေလေ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမကမိန်းမမြတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဘွဲ့ဆိုတာလည်း အမ မယူခဲ့ရဘူး မရခဲ့ဘူး ဒီလောကထဲကို အမဝင်တယ် ဘွဲ့မရဘူး အိမ်
ထောင်ကျတယ် အဖေတို့ အမေတို့မရှိတော့ တင့်တင့်တယ်တယ် မင်္ဂလာပွဲဆိုတာ အမ မရှိခဲ့ဘူး မင်္ဂလာမဆောင်ခဲ့ဘူး အမတို့ ဒီတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးယူထားတာ လွယ်လွယ်ရလို့ လွယ်လွယ်ကွဲသွားတဲ့ သ ဘောပေါ့နော် အဲ့ဒီတော့ မိန်းမမြတ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမ
တစ်ယောက် မိန်းမကောင်းတော့ ဖြစ်ချင်တယ် အဲ့ဒီအတွက် နောက်ခြေလှမ်းဆိုတာ အမမှာမရှိဘူး နောက်ခြေလှမ်းဘယ်သူ့ကိုမှ အမမလှမ်းထားဘူးတစ်ခုလပ်ဆိုတာမျိုးက လူတွေကအမြင် တစ်မျိုးရှိကြတယ်လေ အမသိတာပေါ့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ပဲ ဒါရို
က်တာတွေကသင်ပေးခဲ့တာပဲ နင့်ကိုဘယ်လိုမျက်လုံးမျိုးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် နင်ကဘယ်လိုကြည့်လိုက်ဆိုတာ သိတာပဲ ဒါပေမယ့်အမ လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုလည်းသိတယ် လူတွေရဲ့ အပြော ကိုလည်း သိတယ် ခပ်ပြုံးပြုံးပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လေ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့
ကလူတွေကလည်းသိသွားတော့ ငါတို့လည်းမသိရဘူး ဒီကောင်မကြီး ကြိတ်ခံနေတယ်လို့ ပြောကြတယ် ကြိတ်မခံလို့မှမရတာ အခုချိန်မှာမေးလို့ရှိရင် အမက ရီရီမောမောနဲ့ပြောနိုင်တယ် ဟိုတုန်း ကမပြောနိုင်ဘူး အဲ့ဒီအချိန်ကို အမ ပြန်မသွားချင်ဘူး လို့ ပြောပြသွားခဲ့
တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြူကြူသင်းကတော့ သူမ အိမ်ထောင်ကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. ကြူကြူသင်းတစ်ယောက် အေးချမ်းစွာနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ၾကဴၾကဴသင္းကေတာ့ ဟာသ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ဘဝနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ယခုထက္တိုင္ရရွိေနသူတစ္ဦးပါ။ ဒီလို ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုရရွိခဲ့ေပမယ့္ သူမအေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး
ကံမေကာင္းခဲ့ပဲ အိမ္ေထာင္ကြဲခံရတဲ့ အေၾကာင္းကို မီဒီယာေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာ အခုလို ရင္ဖြင့္လာခဲ့တာပါ။အခ်စ္ေရးဆိုတာမ်ိဳးက ကိုယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္ေလ ကိုယ္အခ်စ္ေတြေပးတယ္ သူတို႔ မယူတတ္ဘူးေပါ့ ကိုယ္လည္းမယူႏိုင္ခဲ့ဘူးေပါ့ အဲ့ဒါမ်ိဳးေပါ့ ကိုယ့္ရဲ႕ကံကိုက
ဒီလိုကံပါလာလို႔ ဒီလိုပဲျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ေနာက္ပိုင္းက်ေတြးတယ္ ပထမေတာ့ ငါ့က်မွ ဒီလိုျဖစ္ရလားဆိုၿပီး အရမ္းဝမ္းနည္းတာ အရမ္းလည္းရွက္တယ္ အမဘဝမွာ ဒီလိုျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ကိုမထင္ခဲ့ဘူး ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ အေမတို႔ဆုံးၿပီးမွ အမက အိမ္ေထာင္ျပဳ
တာကိုး အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဟာႀကီးကိုရွက္တာေပါ့ေနာ္ အိမ္ေထာင္ကြဲတယ္ဆိုတာကို ရွက္တာေပါ့ေနာ္ ကိုယ္အိမ္ေထာင္ပ်က္သြားတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူ႔ကိုမေျပာခဲ့ဘူး သုံးေလးႏွစ္ေနေတာ့မွ သူတို႔သိၾကတယ္ ၃ ၄ ႏွစ္ေတာင္မကပါဘူး
၅ ႏွစ္ေလာက္ေနမွသိတာ သူတို႔က ကိုယ့္အမ်ိဳးသားနာမည္ေမးရင္ ဘယ္မွာလဲ ဆို ဟိုမွာ လိုက္မသြားဘူးလားဆို ဟိုတေလာတုန္းက ျပန္လာတာ အဲ့လိုမ်ိဳးပဲ ဒါေပမယ့္အဲ့လိုေမးတတ္တဲ့လူေတြေရွ႕မွာ အမ ဘယ္ေတာ့မွ မေနေတာ့ဘူး အဲ့လူေတြကိုေရွာင္ေနတယ္ သူ
တို႔နဲ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေနတယ္ သူတို႔နဲ႔တန္းတူရီခ်င္ေပမယ့္ အမမရီႏိုင္ဘူးဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ အမတို႔က မိန္းမသားေတြေလ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အမကမိန္းမျမတ္မျဖစ္ခဲ့ဘူး ဘြဲ႕ဆိုတာလည္း အမ မယူခဲ့ရဘူး မရခဲ့ဘူး ဒီေလာကထဲကို အမဝင္တယ္ ဘြဲ႕မရဘူး အိမ္
ေထာင္က်တယ္ အေဖတို႔ အေမတို႔မရွိေတာ့ တင့္တင့္တယ္တယ္ မဂၤလာပြဲဆိုတာ အမ မရွိခဲ့ဘူး မဂၤလာမေဆာင္ခဲ့ဘူး အမတို႔ ဒီတိုင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီးယူထားတာ လြယ္လြယ္ရလို႔ လြယ္လြယ္ကြဲသြားတဲ့ သ ေဘာေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒီေတာ့ မိန္းမျမတ္မျဖစ္ခဲ့တဲ့ မိန္းမ
တစ္ေယာက္ မိန္းမေကာင္းေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တယ္ အဲ့ဒီအတြက္ ေနာက္ေျခလွမ္းဆိုတာ အမမွာမရွိဘူး ေနာက္ေျခလွမ္းဘယ္သူ႔ကိုမွ အမမလွမ္းထားဘူးတစ္ခုလပ္ဆိုတာမ်ိဳးက လူေတြကအျမင္ တစ္မ်ိဳးရွိၾကတယ္ေလ အမသိတာေပါ့ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ပဲ ဒါ႐ို
က္တာေတြကသင္ေပးခဲ့တာပဲ နင့္ကိုဘယ္လိုမ်က္လုံးမ်ိဳးေလးနဲ႔ၾကည့္လိုက္ရင္ နင္ကဘယ္လိုၾကည့္လိုက္ဆိုတာ သိတာပဲ ဒါေပမယ့္အမ လူေတြရဲ႕မ်က္လုံးကိုလည္းသိတယ္ လူေတြရဲ႕ အေျပာ ကိုလည္း သိတယ္ ခပ္ၿပဳံးၿပဳံးပဲေနႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ေလ ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕
ကလူေတြကလည္းသိသြားေတာ့ ငါတို႔လည္းမသိရဘူး ဒီေကာင္မႀကီး ႀကိတ္ခံေနတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ ႀကိတ္မခံလို႔မွမရတာ အခုခ်ိန္မွာေမးလို႔ရွိရင္ အမက ရီရီေမာေမာနဲ႔ေျပာႏိုင္တယ္ ဟိုတုန္း ကမေျပာႏိုင္ဘူး အဲ့ဒီအခ်ိန္ကို အမ ျပန္မသြားခ်င္ဘူး လို႔ ေျပာျပသြားခဲ့
တာပဲျဖစ္ပါတယ္ၾကဴၾကဴသင္းကေတာ့ သူမ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားရတဲ့ အေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ…. ၾကဴၾကဴသင္းတစ္ေယာက္ ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ဘဝကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့အတွက် အစိုးရကို ကျပ် (၁)သန်း လှူခဲ့တဲ့ (၆) နှစ်အရွယ် သရုပ်ဆောင်လေး ထိပ်ထားသခင်
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ကျော်သူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီ
ဝေဘာဂီဆေးရုံကို မိုင်းဖုန်းဆရာတေ်ာကြီး ကြွလာတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ
နေခြည်ဦးကို လှလှပပ အရှက်ခွဲလိုက်တဲ့ Rescue Task Force အဖွဲ့
ဒီလိုမှဲ့ပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆို လက်မလွှတ်သင့်
စွယ်စုံရ ဘောစကိုင်း (Leucaena Glauca )
သွေးတိုးရှိလို့ ကြောက်နေရလား ….. ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သွေးတိုး ပျောက်ဆေး
နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် သဘောဝဆေးစွမ်းကြီး
သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့